Kanjani ukuyeka lactation kobuhlungu umama nengane?
Umbuzo kanjani ukuyeka ibele, kukhona manje noma ngokuhamba kwesikhathi, wonke umama ubuhlengikazi. Uma ingane liye landa, wayengummeleli ngonyaka noma nakakhulu, yena waba ngidlala egijima izinyawo, isidingo ibele ubalekela ngokwalo. Ingane ithola izinto okudingekayo kusuka nokunye ukudla, futhi umama ngalesisikhathi ukhathele ukusuthisa kokubili ngokokuziphatha nangokwenyama. Ngalesi sikhathi, zikhona emizweni ezingemnandi esifubeni kokusuthisa, izingono obuhlungu, kubonakala sengathi "ingane udonsa kusuka yakho emithanjeni," Ngakho-ke, kusho ukuthi sekuyisikhathi sokuba ayeke ibele.
Enye - the ukumisa lactation ngezizathu zezokwelapha, isibonelo, umama wawathola isifo esithathelwanayo, noma-ke kuyadingeka ukuba bathathe inkambo izidakamizwa ukuthi zibulale kwezinsana.
Yiqiniso, owesifazane ufuna ukwazi ukuthi ukuyeka lactation, ngaphandle ingozi empilweni yena kanye nengane. Phela, nezindlala mammary phakathi nezinsuku zokuqala of kokulunyulwa kusukela webele aluvuvukalanga liyovutha touch futhi kubuhlungu, mhlawumbe ukwandisa ngisho lokushisa. Ukuze ugweme lokhu, kubalulekile ukuba wean ingane kancane kancane, inqubo ingahlala elilodwa kuya ezinyangeni ezimbili. Nciphisa isibalo ibele emini, ushiye owodwa noma emibili ka ibele kusihlwa. Uma umntwana oneminyaka liqala ukwenza izinto futhi nokufuna ebeleni, kungcono ukumphazamisa umsebenzi ezinye ezithakazelisayo, ithoyizi. Khuthaza ingane yakho ukudla esithandayo, uyibeke phezu ipuleti enhle.
Le ndlela nokulunyulwa kuyinto bokuphila ngaphezulu kancane kancane kwenzeka involution we nezindlala mammary nezinkathazo kanye nesifuba (mastitis lactostasis) kalula zibe khona zigwenywe.
Kanjani ukuyeka ibele, uma ubisi azihlalele, amabele kukhona ukuvuvukala obukhulu? Indlela endala edonsa odokotela esifubeni cabanga kungamukeleki. Ngemva ngokuvamile kwenzeka ubisi adenemphraxis clotted, okuyinto igcwele okuvela mastitis abangathelelekile oludlula ngokunganqikazi inqubo ezithathelwanayo. Ngaphezu kwalokho, le ndlela inomphumela omubi phezu kwesimo kwebele. Kuyasiza ekunciphiseni ukucindezeleka zindawo zokusesha ezethusayo, kodwa kumele kwenziwe ukuze kuxazululwe le isimo, hhayi iconsi lokugcina. Shiya eziningi ubisi ebeleni. Kulezi zinsuku kufanele kube ukuvikela unina ibele kusukela ketshezi ashisayo - amasobho, itiye, futhi ungadli ukudla zokwandisa ubisi olukhiqizwa (uju, walnuts).
Ungathola usizo izindlela ezivamile ukukusiza ukwehlisa supply ubisi:
Sage kanye Mint. Emini, kulandele izikhathi 3 ukuphuza isigamu inkomishi yetiye herbal. Ngenxa yale njongo, isipuni yemifino eluhlaza uthele enkomishini yamanzi ashisayo. Ingasetshenziselwa njengoba inhlanganisela amakhambi ukusebenzisa ngamunye wabo eceleni.
Iqoqa ukuyeka lactation. Kuhlanganisa nut ziyadliwa leaf, sage, hop Izigaxa, ethathwe isilinganiso 1: 1: 2. Brew, esekelwe ekubaleni: isipuni ngamunye 200 ml amanzi. Phuza ¼ inkomishi phisa ngaphambi kokudla kathathu ngosuku.
amakhambi isisu. Inadi, izindlebe bear, lingonberry eshiya usizo ngokuphepha ukuqeda uketshezi olunqwabelene emzimbeni, kukhona "ukutubeka" okusheshayo ubisi. Engakapheli amahora angu-emizameni yokuthuthukisa amakhambi isisu ayeke komzimba, webele iba ethambile, ubuhlungu zinyamalale. Nokho, indlela akunconyelwe sabesifazane abangakaze isifo sezinso ezinso, noma iguliswa utshani.
Manje cabanga ngalokho okushiwo lactation ukuziyeka izidakamizwa. Udokotela angase akunikeze imithi ejenti okuyinto zivimbela prolactin - hormone ekhiqizwa pituitary futhi unesibopho lactation. Nazi ezinye zalezi izidakamizwa, "Dostinex", "Parlodel" "Bromocriptine". Nokho, ngemva kokusebenzisa lezi izidakamizwa owesifazane bangezwa ukucobeka, ikhanda elibuhlungu, ukucanuzela kwenhliziyo, ubuhlungu besisu, isiyezi. Ezinsukwini ubudala, lapho kukhona umbuzo mayelana nendlela ukususa lactation aqokwe camphor imijovo, kodwa manje le izidakamizwa kunzima ngempela ukuthola Pharmacy.
izindlela Non-hormone lokusiza ukunciphisa izinga prolactin, buyisidakamizwa "Mastodinon". Siqukethe amakhambi kuphela ukwehlisa prolactin, kuyilapho kungekho ezifana side effects njengoba uma nithatha ejenti hormone.
Ingabe Coconut Oil ngoba elula izimpawu?
PMS kwabesifazane. Ingabe kufanele ngingene aphathe futhi kanjani?
Ukubambezeleka izinsuku 5, isivivinyo alivumi: ungaba yini izizathu?
Konke esikudingayo squid eyaziwa ukuthi caloric kuphela ngayo!
Iresiphi for izinhlanzi amakhekhe
Kungakhathaliseki kungenzeka esesikhathini yokudaya izinwele: amaqiniso kanye nezincomo
Imibuzo yemibuzo yokuhlola: indlela yokuyiqoqa kahle
Izinkomba, side effects kanye yokusetshenziswa we "namaPheresiya"
Ukunqoba Park (eMoscow): isikhathi kanye nohlu ezikhangayo
Ukudla ashise amanoni kanye akusiza ukuba unciphise umzimba ngokushesha